UKUTHENGA KOKUGQIBELA KWI-GIANNI INFANTINO: KUTHENI IKENYA KAKUHLE NGOKUGQIBELA UKUTHENGA I-STATUS QUO (ISAHLUKO-2) - I-Fifa Colonialism
Ikhaya	Amazwana	UKUGCINWA KWE-GIANNI INFANTINO: KUTHENI IKENYA KAKUHLE NGOKUGQIBELA UKUTHENGA I-STATUS QuO (INXENYE 2
UKUGCINWA KWE-GIANNI INFANTINO: KUTHENI IKENYA KAKUHLE NGOKUGQIBELA UKUTHENGA I-STATUS QuO (INXENYE 2
ibhalwe ngu admin Aprili 8, 2020
Kule 2nd Ukufakwa kwamabali ebali lesizathu sokuba I-FIFA kunye neyona nto imdelayo uMongameli uGianni Infantino kunye nomkhabi wasecaleni waseCongo u-Veron Mosengo-Omba bayaqhubeka nokungenelela ngokuqhutywa kweenkqubo zonyulo ezithembakeleyo kuManyano lweBhola ekhatywayo e-Afrika nakwii-FAs I-Caribbean, sifika kwinqanaba laseKenya.
Kwiveki nje ezimbini ezidlulileyo, uMosengo - Omba wangxama wangena kwindlela yotyelelo lwe-Kenya engafezekiswanga, ngokurabha ngesiquphe umatshini wezemidlalo kwi-Kenya esakhelweyo kwiingxabano, emva koko wabiza amaqela anomdla (kubandakanya ubunkokeli boMidlalo ofanayo I-Tribunal Tribunal) kwintlanganiso ukusombulula ingxaki yokucinga.
Ukothuka: Ileta yeFIFA ebingahloniphi kakhulu eKenya.
Umzekelo obonisa ngokucacileyo ukuba i-FIFA, nangona ililungu leBhodi eLawulayo yeHlabathi yeBhola ekhatywayo, okwangoku iyazityeshela iziseko zomdlalo ezisisiseko, kubandakanya umsebenzi weqela kunye nonxibelelwano, ileta ebhalelwe i-Kenyan FA (FKF), igalela amanzi abandayo kwingxelo eyenziwe ENairobi ngoDisemba ophelileyo nguSara Solémalé, onguManejala oPhezulu weeNkonzo zoLawulo kwiFIFA.
Umama. USolémalé wathi "I-FIFA ijongisisa imeko (eKenya) ukuqinisekisa ukuthotyelwa kwesigqibo se-Sports Dispute Tribunal (SDT) (ukuphelisa unyulo lwe-FKF kude kube kuthotyelwe ii-odolo zayo) kwaye kwenziwa nangexesha elifanelekileyo. Kubalulekile ukuba i-FKF yazi ukuba ukuphela kobongameli nexesha lekomitana eliLawulayo leZwelonke elizokuphela nge-10 kaFebruwari ngo-2020, kufuneka kubanjwe unyulo ”.
"IFIFA ingqongqo kakhulu malunga noku, singatshintsha sinike inyanga eyongezelelweyo kodwa kwikota yokuqala yowama-2020 - unyulo kufuneka lubanjiwe."
Isiteyitimenti esiqiqileyo, esenziwe phambi komphathiswa wezemidlalo waseKenya uGqr. Amina Mohamed kunye namagosa e-FKF baxabene kakhulu ngethambo elathatyathwe yile leta yakutshanje evela kuMosengo-Omba.
USarah Solemale: UMphathi oPhezulu weFIFA - IiNkonzo zoLawulo lwe-MA.
Ikratshi kule leta limiselwe kubuxoki obudla ngokuxelwa ukuba ibhola ekhatywayo yeyona nto idume kakhulu eKenya, indawo engwevu exhaphazeleka ngenxa yentando yesininzi yezobupolitika, apho iFIFA ikholelwa ekubeni ukumiswa kwayo ilizwe kwibhola ekhatywayo yamazwe liphela kuya kuba nemidlalo yezopolitiko. Imeko yezopolitiko yaseKenya, imeko apho uninzi lwezopolitiko (abaongameli kunye nabaPhathiswa bezeMidlalo) bangafuna ukuphepha.
Kuyavunywa, ibhola yebhola yeyona midlalo idumileyo eKenya - ewe, i-English Premier League, i-UEFA Champions League kunye ne-Euro - yintloko namagxa abukela kakhulu kwaye inyanzela umabonwakude eKenya veki nganye.
Kodwa hayi ii-lean zase-Kenya zase-Kenya okanye iqela leBhola eKhatywayo yeSizwe saseKenya-Harambee Stars!
Kungenxa yesi sizathu ukuba umsasazi wezemidlalo wePan-African-SUPersPORT-wayeka ukuxhaswa kunye nokusasazwa kwebhola laseKenya ngo-2017, ngelixa kwangaxeshanye esonyusa ukubhaliswa kwanyanga zonke kwiphakheji yakhe yeprimiyamu exhaswa kakhulu yibhola yeNgesi kunye neYurophu.
Kwenzeka njani oko ukuba ujonge inyani?
EKenya, iPremier League (KPL) ayikhange idlulise imeko xa kutyhilwa izihlwele bezisoloko zibona ubungqina eMzantsi Afrika naseZambia okanye eMaghreb, kwaye ukumka kwe-SUPERSPORT kwatyikitywa kwamanye amaqabane akhoyo ukuba i-KPL ngoku ayixabisekanga. ipropathi, inqanaba lokuphuma!
Umphathiswa Wezemidlalo waseKenya: UGqr Amina Mohamed.
Ngelixa uMphathiswa wezeMidlalo waseKenya, uGqirha Amina Mohamed, oonozakuzaku abanobuqili kwaye enamava, ngekhe avume ukunika uMosengo - Omba abaphulaphuli, inokuphantse yacaciswa ngokupheleleyo into yokuba uya kulwa izinyo kunye nezipikili ukuqinisekisa ukuba Ulutsha lwaseKenya olungenatyala aluthwali ziqhayiya zoomatshini ngamagosa e-FKF acacileyo azimiseleyo kunye nomdlalo wehlabathi wezitulo zomculo eziqhutywa nguMongameli weFIFA uGianni Infantino.
Ke ngoko kufuneka sizibuze owona mbuzo unzima, sisiphi isihogo uMosengo -Omba aza kuthengisa eKenya, kwaye kutheni lunyulo lweBhola eKenya lubaluleke kangaka kuGianni Infantino?
Ukuthintela ukuthandabuza, uMosengo-Omba uyeza eKenya ngokuqinisekisa ukuba umi ngendlela yokuba uMongameli we-FKF uNick Mwendwa angahlala e-ofisini, ngendlela efanelekileyo okanye engcolileyo.
Esi siphumo siza kuqinisekisa ukuba uMwendwa uhlala e-ofisini kangange-2nd Isithuba seminyaka emi-4 esiya yonke indlela ukuya ku-2024, nesinokumenza afaneleke ukuvota kwingqungquthela yonyulo yeFIFA yowama-2023, apho u-Infantino uzakube efuna 3rd isigxina kwisiphelo seFIFA.
Ukususela ngoku ukuya kuthi ga ngoku, u-Infantino uyazi ukuba ukuzama ukuphumelela ukuvota ukungazithembi kuye liBhunga eliLawulayo leFIFA, kuya kufuneka kamva ivunywe yiCAF Congress.
Okwangoku, u-Infantino usebenza kwinqanawe, "uyaphumelela imfazwe enye ngexesha, iimfazwe ziphumelele imbumbulu enye ngexesha".
I-duo ebonakalayo: UNick Mwendwa kunye noVeron Mosengo -Omba.
2nd Isimo esisebenza kuyo u-Infantino kukuba "uyazithanda ii-Nigger zakhe buthathaka kwaye zonakele" yiyo loo nto wahambela phambili wahlanganisa i-Afrika kunye ne-Carribeya ngokwamaqela asemthethweni, ngaphandle kwento nganye eyayi-Confederations (CAF neCONCACAF ngokwahlukeneyo), emva koko bayibeke kwichibithi yomhlobo wakhe kunye nogxa afunda naye, umbaleki weCongo, uVeron Mosengo - Omba.
Isizathu esizodwa sokwenza oku ngokucacileyo sobuhlanga obugqithileyo, ngokurhafisa abantu abangabakwaNegroid bephembelela kunye, ngendlela enokuthi ilawulwe kwaye yenziwe, ikakhulu ngeenjongo zokuvota.
Kwelinye icala, uMhlaba uyaqhubeka nokuthwala ubungqina bokuba u-Infantino angathula cwaka ngalo lonke ixesha xa kucalucalulwa ngokwebala ngokuchasene nabathandi bebhola base-Afrika, ukudlala kumaqela aseYurophu kuyabikwa, xa iFIFA inamandla okusebenzisa intonga enkulu apho.
Umongameli we-FIFA uGianni Infantino: ngucalucalulo ngokobuhlanga?
Ngomcimbi wobuhlanga eYurophu, u-infantino wasebenza njengaMcebisi woKhuseleko lweLizwe laseMelika uJohn Bolton, umlobi wemfazwe yase-hawatl e-Whitehouse, owayeka ngobugwenxa ikomiti yangaphakathi eyenzelwe ngokukodwa ukuphendula izoyikiso zobhubhane zehlabathi endaweni kaMongameli Obama ngokwenza isiseko esenziwe nguMongameli GW Bush.
Namhlanje, uMongameli uTrump uthetha malunga nokubulawa kwabantu baseMelika abangama-200,000, 19 ngenxa nje yokuba etshabalalisile indlela ebeya kubamba ngayo ukusasazwa kwe-COVID-XNUMX.
U-Infantino, kwesinye sezenzo zakhe zokuqala njengo-FIFA uMongameli wagxotha umsebenzi we-FIFA anti-Racism owawusekwe ngumbanduleli wakhe uSepp Blatter, eshiya umbutho ngaphandle komgca wokuqala wokuzikhusela kuhanahaniso-buhlanga olunenkani, oluqhutywa lilungelo elinamandla- I-Nationalism iphiko, kwaye iququzela ibaleka kwilaphu lomdlalo webhola ekhatywayo.
Umsebenzi wokulwa ubuhlanga: Uphele ngokufika kuka-Infantino.
Nangona kunjalo, yintoni ebangela i-infantino kweli nqanaba lokothuka ukuba inyanzelise ukuphazamiseka kwakhe kunyulo lwe-Afrika kunye neCaribbean, ilisole ekuphangeni okukhulu kweemali zeFIFA kwezi Mvumelwano zifanayo, kwaye kwinkqubo iqinisekisa ukuqhubeka kokuhlala e-ofisini. ye-FA engathandekiyo kunye nabaongameli boMdibaniso?
Ewe, i-Confederations enkulu ye-UEFA, i-ConMEBOL ne-AFC zisajonge ngamehlo ukumka kuka-Infantino kwi-FIFA, kwaye kwinyanga ephelileyo babecwangcise ukuhambisa intshukumo yokungazithembi kuye kwintlanganiso yabo elandelayo yeBhunga leFIFA.
Esi sicwangciso sathatyathwa kwintlanganiso edibeneyo yezi ndibano ibibanjelwe eNyon, eSwitzerland ekuqaleni kukaFebruwari apho bobabini babhala imemorandam yokuqonda ebandakanya ezinye izindululo ezichasene kakhulu ne-FIFA.
I-infantino ne-UEFA bezikhe zaxabana kangangexesha elithile, i-UEFA ngokufanelekileyo ilindele ukuba uBongameli be-FIFA obulungeleleneyo emva kokuba bephose inkxaso yabo kwi-100% emva kuka-Infantino, bengazi ukuba wayengenakuzinceda ekubambeni imali yase-Saudi Arabia, ephambi kwakhe esebenzisa iJapan. I-SOFTBANK, kwaye leyo ayamkelayo ngasese itshintshiselana ngokudala ukhuphiswano lwe-FIFA entsha kunye nenkqubo yokufaka ikhuphiswano kwi-UEFA, ConMEBOL ne-AFC kukhuphiswano, apho nganye ye-Confederations sele inesivumelwano kunye neengeniso ebeziqikelelwe kwiminyaka ezayo.
UMasayoshi Son: CEO weSoftbank elawula ingxowa-mali yaseSaudi ezimeleyo.
Ngaba i-UEFA, i-CONMENBOL kunye ne-AFC zazinawo amanani kwiBhunga leFIFA lokuphumeza ivoti yokungazithembi?
Ukusuka kuhlalutyo lobulungu beBhunga leFIFA, bekuya kuba kunokwenzeka ukuba bathathe ubuncinci iivoti ezingama-20 kwezingama-36, emva koko baya kwinqanaba elilandelayo lokuqinisekiswa kwiNkomfa yeFIFA.
Xa esi sicwangciso safunyanwa ku-Infantino, wakhawuleza wabiza intlanganiso yeBhunga leFIFA elicwangcisiweyo, ecaphula ubhubhane we-COVID-19, oya kuthi ichaphazele ukubakho kwe-FIFA Congress ngo-2020.
U-Infantino kungenzeka ukuba akazange aqonde ukuba wayedlala ngengozi ngesonka kunye nebhotolo yabadlali bebhola ekhatywayo abalahlekelwe kakhulu, kwaye wongeza oku kulimala ngokubonisa aba badlali ukuba wayenamandla eevoti kwabasencinci kwaye ubukhulu becala abadlali bebhola.
Amalungu eBhunga leFIFA: abangama-20 ngebe bavote ngokuchasene ne-infantino.
Ngokuqinisekileyo iziphumo ziya kubakho kwangoko.
Ukwenza umzekelo, i-UEFA inesiseko sengeniso sonyaka esingaphezulu kwe-4 yeebhiliyoni zeedola kumalungu ayo angama-55, xa udibanisa ubudlelwane bayo kunye nokusasaza ingeniso, ngelixa i-10-ilungu le-CONMEBOL likhupha umndilili we-530 yezigidi ngonyaka kwaye i-AFC isandula ukusayina i-8. -Ixabiso elixabisa amawaka amane ezigidi zeedola, ukubanika umndilili oxabisa iidola ezingama-4 ezigidi, oku kungabandakanyi ingeniso evela kwingqokelela ye-Mena ethe bavuma ukuyipakisha bayithengisa ngokwahlukeneyo.
Kwelinye icala, iAfrican Confederation (CAF), kumdlalo we-adrenalin we-FIFA okokoko sele ikhutshiwe kwaye nocalucalulo olucekeceke irhoxisile iminyaka yabo eli-12, i-1 bhiliyoni eqinisekisiweyo yokujongana nearhente yaseFrance iLagadere Sports and Entertainment (LSE).
I-CONCACAF, ngaphandle nje kokuba ikwazi ukuphakamisa malunga ne-80 yezigidi zeedola minyaka le kumalungu ayo angama-41, yaziwa kakhulu ngengxabano apho ihlawula uMongameli wayo i-2 yezigidi zeedola minyaka le, oko kuthetha ukuba ngoku ugqithile uMongameli weFIFA uGianni Infantino kunye nomphathi we-UEFA u-Aleksandr Ceferin.
Ngokucacileyo, ukuba nazo zonke iiManyano ezintandathu ngokokuvota kokubini kwi-FIFA Council nakwi-FIFA Congress kufanele ukuba ibekwe ityala kwi-International Criminal Court (ICC) njengolwaphulo mthetho kuluntu.
Nganye yeFIFA Confederation yengeniso yonyaka, eyahlula amakhwenkwe emadodeni!
Ngaphandle kokuba u-Infantino uyakwazi ukwenza uthobeleko olukhulu kwi-UEFA-ConMEBOL-AFC bloc ngeli xesha lokuphumla kwe-COVID-19, ngokuqinisekileyo baya kwenza intshukumo ethile enkulu yokumsusa, enokuba yinto ebalulekileyo ekuguqukeni kwimbali egcwele urhwaphilizo I-FIFA kunye neBhola yeHlabathi.
Kungoko kwi-FIFA Congress apho u-Infantino efuna iivoti zika-Mongameli we-FKF, uNick Mwendwa, indoda ethembekileyo ngenxa yokugculelwa kwaye iphembelela ukoyikiswa kweendlela zokuziphatha zeFIFA zokuziphatha gwenxa. Ukusetyenziswa kwemali yeFIFA.
UNick Mwendwa ube yintlekele kumdlalo webhola waseKenya njengoko kubonisiwe kuzo zonke ii-indices ezifumanekayo kubantu baseKenya kwaye ngokuchasene nenkolelo yamagosa ebhola ekhatywayo aphuma kwamanye amazwe, abakholelwa ukuba ukusukela oko uM Mwendwa uphumelele ukuqala kwakhe ubuchwephesha ngegama elithi Riverbank Solutions, kwaye ke kufanelekile ukuba kwenziwe kakuhle, ukuba ngaphezulu kokubiwa kwengxowa-mali ye-FKF.
Bangathini na abaphambukeli?
Ewe, kwisenzo sakhe sokuqala sokuzinikela kulawulo lwakhe, waqala ngokuzabalaza umlo neqela eliphambili leKenya Premier League (KPL), etyhalela phambili nokwandisa iqela lezemidlalo ukusuka kumaqela ayi-16 ukuya kumaqela ayi-18.
Olu lwando lwalubonakala ngokufanelekileyo ukuze alungiselele ukunyuka kweklabhu yakhe - iKariobangi Shark - kwiqela eliphambili le-KPL, emva kokufumana ubunzima kwifomu yokukhuthaza ubuNtshatsheli iminyaka eliqela.
Iklabhu yobuqu kaNick Mwendwa, yeza ngamandla kwi-KPL.
Yintoni oyisebenzisayo yokuba nguMongameli we-FA ukuba awukwazi ukwenza injineli yamaqela akho ekukhuthazeni iqela eliphezulu, akunjalo?
Ngelixa wayekwazi ukushishina iivoti ze-FKF AGM zokuvuma ukwanda kwaye kwinkqubo iphumelele uloyiso lwe-pyrrhic, waphulukana nebhola laseKenya lonke icebo, ngenxa yokuba i-SUPERSPORT isebenzise oku kunyuka kwamaqela njengokuthotyelwa kukwaphula isivumelwano sabo neKPL, ngenxa yoko ukupheliswa kwayo kwangoko.
Ikhontrakthi, eyayikunyaka wokuqala wekota emihlanu eyandisiweyo, yapheliswa ngefuthe elibi kwangoko kwi-KPL kwimigangatho yengeniso.
Ndlela yokuhamba ngu-Mwendwa, wena ubucekeceke bo!
Into ebuhlungu kakhulu kukubukela, kukuba inkcaso ekhoyo kuMwendwa kunye nexesha lakhe elibi njenge-FKF Mongameli 'abalingana' osi-nye 'babini abadiniweyo nabangenamandla. Ibhola yaseKenya ngokucacileyo ayinayo i-vibrancy yokubhenela kwi-newbies entsha kunye nephefumlelweyo.
Abemi baseKenya babukele ngochulumanco kwaye boyika, ukuvuselelwa komtshato kwakhona, okungekho mthethweni kwakhona phakathi kwe-KPL talisman Bob Munro kunye nowayesakuba nguMongameli we-FKF uSam Nyamweya kwilinge lokuthatha uMwendwa.
USam Nyawmeya kunye noBob Munro: Kutheni bahlala kunjalo?
Akukho nto igxininisa ukhetho olunobubele olufumanekayo kubemi baseKenya, kunolu khetho.
Eyona nto ibuhlungu nangakumbi yinto yokuba uNyawmeya noMunro bengasayi kuze bambize uMwendwa ngokuziphatha gwenxa kweFIFA, CAF kunye neengxowa-mali zikaRhulumente.
Isizathu asiqhelekanga njengoko kuyinyani, yimfihlo evulekileyo yokuba bobabini banqwenela ukuzuza ifa lomgaqo woqeqesho lukazwelonke kwaye babe ngabaxhamli bomdlalo weFIFA ogunyazisiweyo.
Umzekelo, kuyo yonke iminyaka emi-4 kaNick Mwendwa, i-FKF ifumene into ephakathi kwezigidi ezili-15 lezigidi zeedola ezingama-20 zeFIFA, CAF, Urhulumente kunye neSponsor, uninzi lwazo sele lungena kwiipokotho zikaMwendwa nakwimimandla yakhe. .
Le mali inkulu kangaka nje iyothusa inaliti yemidlalo yebhola yaseKenya, iRichter, abadlali, abaqeqeshi bayaqhubeka nokuphelisa ubuhlwempu.
IPremier League yaseKenya, ebecingelwa ukuba yeyona nto ibalulekileyo kwibhola yaseKenya ngeminyaka yoo-00 yajika yajika yaba ngumdlalo weqonga, phantsi kolawulo lukaMunro kunye neqela lakhe lamadoda odlamkileyo.
Izixa-mali ezingaphezulu kwezigidi ezili-15 zeedola ezidlula kulo mbutho phakathi konyaka wama-2008 nowama-2017, aba bantu baye baqhuba umbutho bobabini kunobhala weKPL kunye neklabhu. Akukho namnye kubo owayecinga ukutyala imali, iKPL ayinakuthenga nokuthenga indlu ngokusisigxina. Iiklabhu ngoku zihla ngokukhawuleza kuneempukane kwaye iligi ibanjiwe ngabantu abambalwa abanelungelo lokufumana iiklabhu.
I-Adel Amrouche: I-Won kesi ephawulweyo nge-FKF.
USam Nyamweya kwicala lakhe, wayishiya i-FKF inetyala elingaphaya kwezigidi ezibini zeedola, nethe yatyelela ii-ofisi ze-FKF kubathengisi. Okwangoku onetyala le- $ 2 lezigidi elityala kumqeqeshi weqela lesizwe u-Adel Amrouche, i-FKF ijonge kwimeko yokumiswa kwe-FIFA ngokusilela ukuhlawula.
Isango le-Amrouche yayiyindlela yokuguqa edolweni ngu-Nyamweya emva ngo-2014 kwaye iya kuxabisa izixhobo zaseKenya zebhola.
Ngoku la mthombo mithathu ujongene nokujonga itafile, ezibuza ukuba ngubani oza kucofa kuqala kwaye ngethemba lokuba ukukhanya kungabetha enye kwaye kulula indlela yabo etafileni ephezulu, apho banokuthi baphinde bazonwabise.
"Lutsha lwaseKenya, ngubani lowo esihogweni", bayabuza!
Isigaba 3: Kutheni iKenya inokuthi ibe yinto eguqukayo nxamnye ne-FIFA yobukoloniyali
UKUPHUNYEZWA KOLWAZI KWI-GIANNI INFANTINO: ISICWANGCISO SOKUFUNDA KENYA-TRINIDAD & TOBAGO (INXENYE 1
UGIANNI INFANTINO UTSHINTSHO: IKENYA - "IIPUPU ZEFIFA EZINGABONAKALI NEZENKOZO"
#BlackLivesMatter: INDLELA URASI NOKUFUNDISWA KWEZEMALI ...
UKUTHENGA I-DEFEAT, I-FIFA NANGOKU
IZIBHENGEZO NGOKUGQIBELA KWIMFAZWE EFANELEKILEYO: IFIFA IFRANIKIWE ...
I-INFANTINO kunye ne-AHMAD: NGABA UKUGQIBELA NGOKUGQIBELA ...